समाचार - मेरो कारले कस्तो प्रकारको तेल लिन्छ?
तपाईंको गाडीको लागि उत्तम मोटर तेल निर्धारण सिन्थेटिक, सिंथेटिक मिश्रण, उच्च-माइलेज वा पारम्परिक तेल, केहि कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। केहि बाह्य कारकहरू हुन्, जस्तै तपाई बस्ने वातावरण, तपाईको ड्राइभिंग बानी, वा तपाईको इञ्जिनको उमेर। अन्य कारकहरू तपाईंको गाडीको ईन्जिन प्रकार र निर्माताको विनिर्देशहरूको आधारमा तय गरिएको छ। यो तपाईं कारहरूमा प्रयोग गरिएको तेलको प्रकारका बारे जान्न चाहानु भन्दा बढी हुन सक्दछ, तर तपाईंलाई तपाईंको कारको बारेमा पूर्ण जानकारी दिनको लागि फायरस्टोन पूर्ण स्वतन्त्र सेवामा छोड्नुहोस्। तपाईं मोटर तेल मा एक विशेषज्ञ हुन जरूरी छैन। त्यसैले हामी यहाँ छौं। आज भेट्नुहोस् वा तपाईंको छिमेकको फायरस्टोन पूर्ण गाडी सेवा स्टोरमा भेट्नुहोस्। हाम्रो टायर र अटो सेवा पेशेवरहरू सँधै तपाईंको सेवाको लागि तयार छन्!
मोटर तेल को प्रकारहरु
त्यहाँ चार सामान्य मोटर तेल प्रकार छन्:
पूर्ण सिंथेटिक मोटर तेल
पूर्ण सिंथेटिक तेल सवारी साधनहरूको लागि आदर्श हो जुन शिखर तहको प्रदर्शन र उच्च स्तरको स्नेहनको लागि माग गर्दछ। पूर्ण सिंथेटिक तेल उच्च चिपचिपापन स्तर प्रदान गर्दछ, ऑक्सीकरण र तापीय बिग्रन प्रतिरोध, र तेल काँच विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ। साथै, यसले ईन्धन दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र सवारीको हार्सपावर पनि बढाउन सक्दछ इन्जिन ड्र्याग कम गरेर।
किनभने सिंथेटिक मोटर तेल नियमित तेल भन्दा दुई देखि चार गुणा बढी खर्च गर्न सक्दछ, आफ्नो टेक्नीशियनसँग कुरा गर्नुहोस् कि यो तपाईंको कारको लागि सही तेल हो कि भनेर। यदि तपाईं सुपर चिसो जाडो या धेरै तातो गर्मी संग एक वातावरण मा बस्नुहुन्छ, वा टाई or वा ह haलिंग को लागी तपाईंको गाडी को उपयोग, कृत्रिम तेल तपाईंको गाडी को लागी राम्रो प्रकारको तेल हुन सक्छ। पुराना इञ्जिनहरूले पनि सिंथेटिक तेलबाट फाइदा लिन सक्दछन्, किनकि यसले हानिकारक फोहोर निर्माण रोक्न मद्दत गर्दछ जुन केही पुराना ईन्जिनहरूले प्रवण देखिन्छ।
सिंथेटिक ब्लेन्ड मोटर तेल
सिंथेटिक मिश्रण तेल दुबै संसारको सबै भन्दा राम्रो प्रदान गर्दछ। योसँग पूर्ण सिंथेटिक तेलको धेरै सुविधाहरू छन्, तर धेरै कम मूल्यमा। यस प्रकारको तेल कृत्रिम र पारंपरिक आधार तेलहरूको मिश्रण हो, र केही थपकहरू, अक्सिडेशन र उत्कृष्ट कम-तापमान गुणहरूको अतिरिक्त प्रतिरोधको लागि। सिंथेटिक मिश्रणहरूले ड्राइभरहरूलाई पारम्परिकबाट सिंथेटिक तेलमा स्विच गर्न सजिलो बनाउँदछ, त्यसैले यो प्रकारको तेल आजका बचतकर्ताहरू बीच लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। यो ड्राइभरहरूको लागि एक उत्तम मध्य मैदान हो, जो एक कृत्रिम तेलको थप सुरक्षा र प्रदर्शन चाहान्छ, तर पूर्ण सिंथेटिक तेलमा कुल स्विचको लागि बिल फिट गर्न तयार नहुन सक्छ।
परम्परागत मोटर तेल
पारम्परिक तेल तेलको प्राय: जसो प्रयोग हुने प्रकार हो। यो लाइट ड्युटी, लेट-मोडेल कारहरू जुन कम देखि औसत माइलेज र साधारण इञ्जिन डिजाइनको लागि आदर्श हो।
उच्च माइलेज मोटर तेल
उच्च माइलेज तेल विशेष गरी 75 75,००० माईलको कारका लागि डिजाइन गरिएको हो। यस प्रकारको तेलले तेलको खपत कम गर्न, चुहावट र तेल सीपेजलाई कम गर्न, र पुराना इञ्जिनहरूमा धुवाँ र उत्सर्जन घटाउन पनि मद्दत गर्दछ।
तेल additives का प्रकार
मोटर तेल सामान्यतया केहि additives समावेश गर्दछ जुन तेलको%% र %०% बीचमा बनाउन सक्छ। यी योजकहरूले तेलको प्रदर्शन बढाउन मद्दत गर्छन्। मोटर तेलले निम्न थपहरू समावेश गर्न सक्दछ:
Antioxidants: Antioxidant additives oxidation धीमा गर्न र मोटर तेलमा सञ्चयको गठन गर्न कार्य गर्दछ। तिनीहरूले पनि ईन्जिन सफा राख्न र मोटर तेलको आयु बढाउनमा मद्दत गर्दछ।
■ एन्टि-वेयर एजेन्टहरू: एन्टि-वेयर एजेन्टहरूले ईन्जिनको केही भागहरू बचाउन मद्दत गर्दछ जुन विशेष गरी सिलिन्डर भित्ताहरू, लिफ्टरहरू, क्यामहरू, र पिस्टन रिingsहरू जस्ता उच्च तापमानबाट क्षतिको लागि संवेदनशील हुन्छ। यस योजकले यी घटकहरूको वरिपरि एक सुरक्षात्मक तहको रूपमा कार्य गर्दछ धातु-मा-धातु परिस्थितिहरूमा घर्षण सीमित गर्न।
डिटर्जन्ट्स: यो योजक तपाईको धुलाई डिटर्जेंट जस्ता छैन! यसले पिस्टनको घण्टी क्षेत्र, पिस्टन अण्डर-क्राउन र अन्य सतहहरू जुन अत्यधिक तातोमा पार्छ भन्नेमा गठन, निक्षेप, रस्ट र क्षय रोक्नमा केन्द्रित छ।
Pers Dispersants: यो तपाईंको तेल को जादू घटक हो। यसले तपाईंको तेललाई ठोस दूषित पदार्थहरू समात्न र समात्न क्षमता दिन्छ ताकि उनीहरूले इन्जिनलाई नोक्सान गर्दैनन्।
फोम अवरोधकर्ताहरू: यो योजकले जस्तो देखिन्छ ठीक ठीक गर्दछ। फोम अवरोधकर्ताहरूले मोटर तेललाई फोम र बबलहरू बनाउनबाट रोक्दछन्। यदि फोम र बुलबुले गठन गरेको भए, तेल इन्जिनको महत्त्वपूर्ण भागहरू कोट गर्न र यसलाई शान्त राख्न असमर्थ हुनेछ।
घर्षण परिमार्जनकर्ताहरू: घर्षण परिमार्जनकर्ताहरूले घर्षण कम गर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईंको ईन्जिन उच्च तापक्रम र भारी भारको साथ सञ्चालनमा छ। यो योज्य तपाइँ तपाइँको ईन्धन दक्षता अधिकतम मद्दत गर्न सक्छ।
पोइन्ट-पोइन्ट डिप्रेसनसन्टहरू: यो योजकसँग तपाईंको तेलको वास्तविक खसालि गर्न केही पनि छैन। वास्तवमा, पोइन्ट-पोइन्ट डिप्रेसेन्ट्सले तेलमा रहेको मैन कणहरूलाई चिसो अवस्थामा कडा हुनबाट बचाउँछ। नतिजाको रूपमा, मोटर तेल कम, चिसो तापक्रममा स्वतन्त्र रूपमा पनि बग्दछ र इन्धनलाई पम्प गर्नको लागि कडा परिश्रम गर्न आवश्यक पर्दैन।
Ust रस्ट र जंग अवरोधकर्ताहरू: तपाईको ईन्जिनको आन्तरिक भागहरू एसिड र ओसको सम्भावित हुँदा रस्ट र कोर हुन्छन्। यी additives यस्तो क्षति रोक्न मद्दत गर्न तपाइँको ईन्जिनको आन्तरिक भागहरूमा एक सुरक्षात्मक फिल्म सिर्जना गर्दछ।
■ विस्कोसिटी-इन्डेक्स सुधारकर्ताहरू: यी योजकहरूले तपाईंको ईन्जिनको तेललाई तापमान उतार-चढावको बावजुद कार्य गर्न मद्दत गर्छन्।
सिलिकॉन रबर सील, स्पेयर पार्ट्स, आर्म बुशिंग नियन्त्रण गर्नुहोस्, गाडी सहायक, सिलिंग पार्ट, एलेमेन्ट क्ल्याम्पि।,